BusKill: tambo iyo inotangisa iyo yekuzviparadza ye laptop yako kana ikabiwa | Linux Vakapindwa muropa
BusKill: tambo iyo inotangisa iyo yekuzviparadza ye laptop yako kana ikabiwa
Pasina mubvunzo rimwe rematambudziko makuru akaratidzwa mune chero nyika imhosva uye zvakanyanya kudaro munyika dzeLatin America mune kusachengeteka kukuru kunowanikwa mazuva ese, kunyangwe zvisinei nenzvimbo iri musoro wenyaya unokurukurwa zuva nezuva.
Kubva pakurwiswa pane zvekufambisa, girazi remota yako riputsike kuti ubire zvinhu zvako, vanobvuta bhegi rako, nezvimwe.. Izvo zvinhu izvo vanhu vanonyanya kungwarira nezvazvo.
Uye ndezvekuti kunyangwe kana matanho ese akakosha akatorwa, izvi hazvireve kuti une chokwadi chizere. Sezvo kusatombosiya zvinhu zvako mumba mako zvakachengeteka zvachose.
Chikonzero ini ndinouya nemusoro uyu ndechekuti ndichivhura mambure ndakasangana mudziyo unonakidza kwazvo une zita BusKill.
Este mudziyo unogona kubatsira kune avo vese vanogara vachitakura malaptop avo sezvo avo ezuva nezuva mabasa anovada.
BusKill Inozivikanwa nekuve tambo ye USB inova nebasa rekutumira mamwe magwaro izvo zvinogona kubatsira kuchengetedza zvakavanzika dhata pane yako laptop kubva kubiwa kana uchishanda munzvimbo yeruzhinji.
Uye ndeyekuti injinjini yesoftware Michael Altfield, ndiye aive achitungamira kuita dhizaini yekukanganisa tambo inonzi BusKill iyo Iyo inogona kukonzeresa chiito chakati kana iwe ukatanura kubva palaptop.
Akauya nepfungwa iyi mushure mekutsvaga yakapusa, yepasi-tech mhinduro yekuita kuti komputa ivharike, ivhare, kana kuzviparadza kana yaparadzaniswa nemuridzi.
Sezvo zvakadaro hapana chiyero chinovimbisa zana muzana kudzoka kana kudzoreredza laptop kana zvabiwa. Asi chii chiri chokwadi ndechekuti iwe unogona kunyorera chiyero kuchengetedza ese akavanzika data ari pafoni yako.
Iye anorondedzera kubiwa kwechigadzirwa pawebhusaiti yake:
Ngatimbofungai nezvechiitiko: Iwe uri munzvimbo yeruzhinji (taura cafe) nepo uchisimbisa kune rimwe basa rakakosha (taura kubhengi kwepamhepo). Asi ko kana, mushure mekunyatsoongorora, mumwe munhu akaba laptop yako? Atfield akanyora.
“Pamwe unogona kufonera bhangi rako kuti riomise maaccount ako asati akonzeresa kukuvara kwemari kwakakura. Pamwe handikwanise.
Iyo system inoshanda nekutarisa kune USB chiteshi kune imwe mhando ye USB kiyi. Atfield inoshandisa tambo yemagineti inodzima iyo inogona kudimbura kana mumwe munhu akamutorera laptop achibva anyora kodhi yakapusa inoshanda paLinux kana Mac OS kuti itange chiito apo kiyi yeUSB inonyangarika kamwe kamwe.
Mune mamwe mazwi, kana tambo ichibviswa, komputa ichapunzika.
Izvi zvinogona kuve chinhu chakareruka sekuvhura yako saver yekuvhara kana kudzima chishandiso chako (kumanikidza mbavha kuti ipfuure yako yechokwadi malaptop maitiro usati wawana chero ruzivo iyo script inogona zvakare kugadzirirwa kupukuta chishandiso kana kudzima mamwe maforodha (kudzivirira mbavha kubva mukuwanazve zvakavanzika data kana kuwana yakachengeteka bhizinesi kumashure).
"Tinoita zvese zvatinogona kuti tiwedzere OpSec yedu patinoshandisa laptop yedu pazere vanhu, sekushandisa yakanaka VPN mupi, 2FA, uye password dhatabhesi-kuzadza kudzivirira kuturika padandemutande kana pabendekete," anodaro Altfield. "Asi kunyangwe zvakadaro, panogara paine njodzi yekuti mumwe munhu angaba laptop yako kana yagadziriswa!"
Pawebhusaiti yake, iyo Linux IT nyanzvi yakatumira mirairo yekuti munhu wese anogona sei kuvaka yavo tambo dzeBusKill.
Izvo zvinhu zvekutanga zvinosanganisira USB flash drive (inogona kunge isina chinhu, hapana dhata inoda kuchengetwa pairi), carabiner kiyi fob yekubatanidza tambo yeBusKill kubhandi rako, yemagineti kutyora USB adapta, uye chaiyo USB tambo.
Kana iwe uchifarira nyaya iyi, unogona kutarisa kuburitswa. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » BusKill: tambo iyo inotangisa iyo yekuzviparadza ye laptop yako kana ikabiwa
Wayfire 0.4: compiz-akafuridzirwa Wayland munyori
Miswe 4.4 inosvika neTor 9.0.6, inogadziridza, inogadzirisa uye nezvimwe